လိမ်မပြောသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း—သားသမီးတွေကို …- الغسيل သုံး ပစ္စည်း ရောင်း ,ရှဖိရေ က ‘ဟုတ် ပါတယ်။ ဒီလောက် ပါပဲ’ လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ ဒါ လိမ်ပြော နေတာ။ လယ် ရောင်း လို့ ရတဲ့ ငွေ တချို့ တစ်ဝက် ကို ဖယ် ထားပ ...ကျူးလစ် မုန်တိုင်းသမိုင်းရှိခဲ့သည့်ပန်း — …ကျူး လ စ် ပန်း ဥ သည် လူ ကြိုက် အများဆုံး ကုန်ပစ္စည်း ဖြစ်လာ သော ၁၆၃၀ ပြည့်လွန် နှစ်များ တွင် ကျူး လ စ် အရူးအမူး သည် အထွတ်အထိပ ...
လက်မှုပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်ထဲ ၀င်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အရောင်အသွေးစုံ၊ ဒီဇိုင်းစုံလှတဲ့ ခြင်းတောင်းငယ်လေးတွေက စာရေးသူတွေရဲ့ အမြင်အာရုံကို ဖမ ...
တမန်တော် ၄ — ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း …
ဒါဟာ ယေဟောဝါသက်သေများရဲ့ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပါ။ဒီစာကြည့်တိုက်မှာ ယေဟောဝါ သက်သေများရဲ့ စာပေတွေကို ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ …
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၈ - တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲဝင် ကြမယ့် ဒေသခံ ဝါသနာရှင် တွေ သာမက စီးပွားရေးကြော်ငြာပါတဲ့ မီးပုံးပျံလုပ ...
Outfit By Poppy - 💜 Bkk bags ကိူ ၁ လုံး ၇၅၀၀ ကျပ် ထဲ နဲ့ ...
Admin က ရောင်း ပေး ရင် မြန် မာ ပြညိ မှာ အ လွယ် တ ကူ မ ရ နိုင် တဲ့ ဟာ လေး တွေ ပဲ ရှာ ရောင်း ပေး တာ ပါ ကိုယ် တိုင် သုံး တဲ့ ပစ္စည်း တွေ ပဲ ...
သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှု ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ …
သဘာဝဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှု ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ လျော့နည်းသော်လည်း ယခင်နှစ်ထက် ပြည်ပပို့ကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ခန့် ပို၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ယခင်နှစ ...
Laptop သီးသန့်ရောင်း ၀ယ်ရေး (Yangon) Public Group …
Laptop သီးသန့်ရောင်း ၀ယ်ရေး (Yangon) has 6,284 members. Laptop ႏွင့္Computer ပစၥည္ းမ်ား လြတ္ လပ္ စြာ ေရာင္ းဝယ္ လို႔ရပါတယ္ . Buy and Sell Group
POS Software တွေက …
သင်ဟာ POS Software တစ်ခု ကို ဝယ် လိုက် ပြီးပြီ ပြီးတော့လည်း Hardware ပစ္စည်း တွေ လဲ တပ်ဆင် လိုက် ပြီးပြီဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဆိုင်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ လက ...
သင့်ရဲ့ “ယုံကြည်ခြင်း ဒိုင်းလွှားကြီး” ကို …
pre：مسحوق المنظفات هيبوالرجينيك الفلبينnext：أفضل صابون بار فاخر